काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना गुरु र आमाबाट दशैंकाे टीका लगाउनुभएकाे छ । गुरु खेमचन्द्र ढकालबाट १० बजेर १९ मिनेटको साइतमा टीका र जमरा ग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा...
दाङका एक व्यक्तिले शिक्षकबाट राजीनामा दिएर बगरमा केरा खेती गर्नुभएको छ । लमही नगरपालिका–३ फल्कापुर निवासी नारायणप्रसाद भुषालले बगरमा केरा खेती गरेका छन् । राप्ती नदीले कटान गरेको लमही–२ राजपुरको करिब १२ बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरेको उनले बताए ।...
अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले कोभिड–१९ विरुद्धको सम्भावित खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ या छैन भन्ने डिसेम्बर महिनासम्ममा थाहा हुने बताएका छन् । तर, व्यापकरुपमा खोप पाउनका लागि सन् २०२१ सम्म पर्खनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नोभेम्बरको...
खसीको ह्याकुला कसरी पकाउने? (तरिकासहित)
हामीमध्ये धेरैलाई खसीको ह्याकुला खान मनपर्छ। बाहिर रेस्टुरेन्टतिर खाएका पनि हौंला। अब दसैंको बेला त कता जानु खान! तर दसैंमा घरै बसेर ह्याकुला तारेर खान सक्नुहुन्छ। हामीले सेफ कुमार चालिसेको सहयोगमा तपाईंलाई यहाँ ह्याकुला पकाउन सिकाएका छौं। आवश्यक सामग्रीहरुः १)...
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सुभ साइतमा गुरु र त्यसपछि आमाको हातबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा आज गुरू खेमचन्द्र ढकालबाट १० बजेर १९ मिनेटको शुभसाइतमा टीका र जमरा ग्रहण गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गरेको...
शाहरुख खान, काजोल र रानी मुखर्जी अभिनित हिट चलचित्र ‘कुछ कुछ होता हे’ मा साइलेन्ट सरदार किडको भूमिकामा देखिएका परजान दस्तूर विवाह बन्धानमा बाँधिने भएका छन् । परजानले गत वर्ष अक्टुबरमा डेलना श्रौफसँग इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । सोही समयको फोटो...
भारतीय राजदूतले भने– दसैंले नेपालीको राम्रो भाग्य ल्याओस्
१० कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले नेपालीहरुलाई दसैंको शुभकामना दिएका छन् । उनले दसैंले नेपालीहरुको राम्रो स्वास्थ्य, समृद्धि र भाग्य ल्याओस् भनि कामना गरेका छन् । नेपाली भाषामा ट्वीट गर्दै भारतीय राजदूत क्वात्राले भनेका छन्, ‘असत्यमाथि...
नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं मान्न देशका शहरी क्षेत्रबाट मानिसहरु यसवर्ष गाँउघरमा झरेका छैनन्, सडकमा यतायातको भिडभाड छैन, नयाँ कपडा, खाने कुरा खासै किनिएन, नवरात्रीमा मठ–मन्दिरमा श्रद्धालुहरुको घुँइचो देखिएन, मिष्ठान परिकारहरु कमै बने, घरहरु रङ्गले पोतिएका छैनन्, पिंगहरु सरर.. हुँइकेका छैनन्,...
कोरोना भाइरसका संक्रमण फेरि महामारीका रुपमा फैलिएपछि स्पेनले देशव्यापी संकटकाल घोषणा गरेको छ । त्यस्तै रोकथामको प्रयासस्वरुप रातको समयमा कर्फ्यूु घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आइतबार राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म देशभर कर्फ्यू लागुु हुने बताए ।...
चिनियाँ राजदूतको स्वरमा सुन्नुहोस् ‘रेसम फिरिरि’
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाली गीत गाउँदै दसैँको शुभकामना सन्देश दिएकी छिन् । राजदूत यान्छीले चर्चित नेपाली गीत ‘रेशम फिरिरि’ गाएकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमा गीत गाएको भिडियो पोष्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘ मेरा सहकर्मीहरू र मैले...
राष्ट्रपतिले आमा र गुरुबाट लगाइन् दसैंको टीका
४० मिनेट अघि अनलाईन खबर
१० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा आज गुरु खेमचन्द्र ढकालबाट टीका ग्रहण गरेकी छन् । उनले १० बजेर १९ मिनेटको शुभसाइतमा टीका र जमरा ग्रहण गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय,...
बडा दशैँअन्तर्गत आज दशमीका दिन मिथिलाञ्चलमा यात्रा पर्व मनाइँदैछ । यात्रा पर्वलाई मिथिलाञ्चलमा जतरा पर्व पनि भनिन्छ । धार्मिक मान्यताअनुसार दशमीका दिन भगवती दुर्गाको यात्रा हुने भएकाले यसलाई वर्षभरिकै सबैभन्दा पवित्र दिन मानिन्छ । मिथिला क्षेत्र शक्ति उपासनाका लागि प्रसिद्ध...
पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका यासोक बजारमा रहेको परेवाको गुँड तथा त्यहाँ रहेका परेवाको संरक्षणमा जुटेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको ऐतिहासिक यासोक बजारको मध्यभागमा अवस्थित परेवाको गुँड मर्मत सम्भार तथा त्यहाँ रहेका परेवाको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले समिति नै गठन गरेको हो...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा आज गुरु खेमचन्द्र ढकालबाट १० बजेर १९ मिनेटको शुभसाइतमा टीका र जमरा ग्रहण गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गरेको...
डोटीको लामीखाल र जाजरकोटको हलचौरमा बिजुली पुगेपछि छायाे उज्यालो
५१ मिनेट अघि उज्यालो अनलाईन
डोटीको लामीखाल र जाजरकोटको हलचौरमा बिजुली पुगेपछि गाउँ उज्यालो भएका छन् । डोटीको पश्चिमी क्षेत्र आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर ५ लामिखालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत लाइन पुगेको छ । विद्युत लाइन विस्तारसँगै लामिखालका गाउँ झिलिमिली भएका छन् । लाइन...
खल्लो भयो ट्राफिक प्रहरीको दशैं : साँचेको बिदा पनि पाइएन, पारिवारिक जमघट भिडियोकलमै सीमित !
‘बाबा हजुर दशैंमा कहिले आउने ? मलाई जुत्ता र मोटुपत्लुको झोला ल्याइदिनू है । मामुले भन्नुभएको सारी चाहिन्छ रे !’ ‘छोरी म अहिले आउन पाउँदिनँ । कोरोनाभाइरस छ । म जुत्ता र झोला पठाइदिन्छु, हस् ।’ फेसबूकको भिडियो कलमा महानगरीय ट्राफिक...
बडादशैंको मुख्य दिन विजया दशमी आज । आज मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद टीका र जमरा लगाएर आशीर्वाद ग्रहण गरी मनाइँदैछ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तोकेको उत्तम साइत १०:१९ मा अधिकांशले टीका-जमरा लगाएका छन् । यद्यपि विजयादशमी आफैंमा शुभ दिन भएकाले सोमवार टीका...
महोत्तरी लगायतका मिथिला क्षेत्रमा सोमबार देवी प्रतिमा विसर्जन गरिँदैछ । शारदीय नवरात्रका अवसरमा निर्माण गरी स्थापित गरिएका देवी दुर्गाका प्रतिमा देवी पूजन सम्पन्न भएसँगै सोमवार विजया दशमीका दिन पवित्र जलाशयमा विसर्जन गरिन्छ । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित अति प्राचीन भार्गव, पुरन्दर सर...
दाङका एक व्यक्तिले शिक्षकबाट राजीनामा दिएर बगरमा केरा खेती गरेका छन् । लमही नगरपालिका–३ फल्कापुर निवासी नारायणप्रसाद भुषालले बगरमा केरा खेती गरेका छन् । राप्ती नदीले कटान गरेको लमही–२ राजपुरको करीब १२ बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरेको उनले बताए ।...
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय नाम हो मोहन वैद्य ‘किरण’ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिवसमेत रहेका वैद्य अहिले सक्रिय कयौं कम्युनिस्ट नेताका राजनीतिक गुरु पनि मानिन्छन् । तडकभडक र सुख–सुविधाबाट टाढा सादगीपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका वैद्य कम्युनिस्ट भएकै कारण धर्मप्रति...
नेपालीहरूको महान् पर्व बडादशैंको अवसरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाली गीत गाउँदै विजयादशमीको शुभकामना दिएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा राखिएको गीतको भिडियोमा राजदूत यान्छीले चर्चित नेपाली गीत रेशम फिरिरी गाएको देखिन्छ । ट्वीटरमा उनले देखेकी छन्, ‘मेरा...
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६७ पुगेको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार थप थप ४ जनाले ज्यान गुमाएसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६७ पुगेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–५...
सिन्धुली – सिन्धुलीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका–८ कर्करेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा घाइते भएका चालक महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१४ का २३ वर्षीय संगम कार्कीको उपचारका क्रममा सिन्धुली अस्पतालमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले...
अमेरिकी राजदूतले खसीको मासु पकाए, दशैं टीका लगाए
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेपाली हिन्दूहरुको महान् चाड दशैं मनाएका छन् । उनले दशैंको अवसरमा नेपालीहरुलाई शुभकामना मात्र दिएका छैनन्, सामाजिक सन्जालमा आफूले टीका लगाएका तस्वीरहरु पनि राखेका छन् । यतिमात्र होइन, उनले केही दिनअघि नै दशैंमा खसीको...